गेरुवस्त्र लगाएर हिड्‍ने कृष्ण पहाडी भुस्याहा कुकुर र महाअाततायी हुन् — OnlineDabali
उनले बम हानेको खुब बढाइँचढाइँ चर्चा गरेका छन् तर किन बम हान्ने अवस्था आयो भन्नेमा एक शब्द चुहाएका छैनन् । बम हान्ने अवस्थाभन्दा पहिले लगभग ९ वर्षदेखि प्रचण्ड-बाबुराम, कांग्रेस, एमालेसँग नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था मात्र हुन संभव छैन र मानिँदैन, नेपालको राज्य व्यवस्था संसदीय व्यवस्था भन्दा नयाँ हुनुपर्छ, राज्यमा विद्रोही पक्ष र पुरानो राज्य पक्षको बीचमा बराबर अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ भनेर हामीले गरेको संघर्ष पहाडी जस्तो चम्मुलाई थाहा थिएन ? जनमुक्ति सेनाको विघटनपछि माओवादी विभाजित भएको र क्रान्तिको प्रकृया अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको थाहा थिएन् ? संविधान घोषणाको विरोध, जनप्रतिनिधिसभा र जनसरकार निर्माणको घोषणा, स्थानीय चुनावको खारेजी, केन्द्र र प्रदेशसभा चुनावको खारेजी घोषणा के सबैलाई थाहा थिएन ? सबैलाई पूर्णरुपले जानकारी हुँदाहुँदै हामीलाई कुइनाले मिचेर लगिन्छ भन्ने सोच पुराना र नयाँ दलालहरुमा थिएन ? जब राज्यले भित्तेलेखन, प्रचार, सभा पनि गर्न दिएन, रातारात सयौं कार्यकर्तालाई समात्यो, स्थानीय चुनावमा कालीकोटमा गोली चलाएर निर्दोष नागरिकको हत्या गर्‍यो, गोलीले घाइते बनायो, यो चुनावमा पनि कडा दमन एकप्रकारले कफ्र्यु जस्तो लगाएपछि त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्नु, हाम्रो नेता र कार्यकर्ताले गर्नु कसरी मानवाधिकारको हनन् हुन्छ ? यदि हनन् भएको थियो भने त जनतामाथि लगातार राज्यबाट दमन हुनु मानवाधिकारको हनन् हुनु पर्दथ्यो नि ! यदि पहाडी सच्चा मानवाधिकारवादी भएको भए त उनले जनता र हाम्रो पार्टीमाथि भएको दमनको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्नुपर्थ्यो ।
यहाँ एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ नेपालमा कुनै लोकतन्त्र आएको छैन । जनताको व्यवस्था र सत्ता बनेको छैन । यो पुँजीवादी सत्ता हो त्यो पनि दलाल पुँजीवादी सत्ता हो । जसलाई फाल्न नेपालमा बारम्बार विद्रोह र क्रान्ति हुने गरेका छन् । जनयुद्धले यसको अन्त्य नजिक पुर्‍याएको पक्कै हो तर पुराना र नयाँ दलालहरु मिलेर यो संभावनाको घाँटी निमुठेका छन् र नेपाली जनतालाई पुनः दलाल पुँजीवादी सत्ताकै पैतलामुनी पुर्‍याएका छन् । यहाँ एमाले-माके गठबन्धनलाई जनताको विजय भनेर चिच्याएको पनि देखिन्छ ।
यो किमार्थ होइन । सत्ता जनताको हातमा नआएसम्म पुरानो सत्ताभित्र कांग्रेस, एमाले, माके जो गए पनि ती दलाल पुँजीवादी सत्ता कै कारिन्दाहरु हुन् । उनीहरु दलाल सत्ताको जुवा र हलोमा जोतिनु र चुटाइ खानुबाहेक कुनै विकल्प छैन । तसर्थ, पहाडीले जसरी लुटतन्त्रलाई लोकतन्त्रको पगरी गुथाएर क्रान्तिकारी जनता र योद्धाहरुविरुद्ध रोष पोखेका छन् । त्यो न लोकतन्त्रको सन्देश हो नत मानवाधिकार कै चिन्ता हो । त्यो त लुटेराहरुको सत्ता खतरामा परेपछि दलालहरुमा पैदा भएको आतङ्कको चित्कार मात्र हो । लुटतन्त्रको रक्षार्थ दलाल दल, नेता र पहाडी जस्ता ‘मानवाधिकारवादी’हरुले जति चित्कार छोडे पनि जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त नभएसम्म विद्रोह र क्रान्तिलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।
७ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने १८ वर्षीय युवकलाई फासी